नायक प्रदीप र नायिका जसिता विच सम्वन्धमा दरार! – Hotpati Media
नायक प्रदीप र नायिका जसिता विच सम्वन्धमा दरार!
४ कार्तिक २०७६, सोमबार २२:२९ मा प्रकाशित (7 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
काठमाडाैं-अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङ पनि प्रेम सम्बन्धको चर्चाले केही समय राम्रै लाइमलाइटमा रहेका थिए । फिल्म ‘लिलिबिली’ को सेटबाट उनीहरुको प्रेम अंकुराएको बताइन्छ । तर, पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘लभ स्टेशन’ असफल भएपछि उनीहरुको प्रेम सम्बन्धमा पूर्णविराम लागेको चर्चा छ । हुनत, फिल्म रिलिजको बेला प्रेम र रिलिजपछि कलाकारको ब्रेकअपको खबर आउनु नौलो कुरा होइन ।